Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » IATA: Baahida xamuulka hawada caalamiga ahi waxay ka sarreysaa awoodda
Airlines • Airport • Wararka Ururada • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Iyada oo socdaalkii caalamiga ahaa uu weli aad u niyad -jabsan yahay, waxaa jira diyaarado rakaab oo yar oo bixiya awoodda caloosha ee xamuulka. Caqabadaha silsiladda sahaydu way sii xoogaysan karaan iyadoo ganacsiyadu ay sii xoojinayaan wax soo saarka.
Baahida caalamiga ah, oo lagu cabiray xamuulka tan-kiiloomitir (CTKs), waxay kor u kacday 7.7% marka la barbar dhigo Ogosto 2019 (8.6% hawlgallada caalamiga ah).
Heerka koritaanka ayaa xoogaa hoos u dhacay marka la barbar dhigo bishii Luulyo, taas oo aragtay baahida loo qabo koror 8.8% (marka loo eego heerarkii ka horeeyey COVID-19).
Soo kabashada awoodda xamuulka ayaa hakad gashay bishii Ogosto, taasoo hoos u dhacday 12.2% marka la barbar dhigo Ogosto 2019 (13.2% hawlgallada caalamiga ah). Marka la eego bil-bil, awoodda ayaa hoos u dhacday 1.6%-hoos u dhacii ugu weynaa tan iyo Janaayo 2021.
The Ururka Caalamiga ee Gaadiidka Cirka (IATA) sii daayay xogta Ogosto 2021 ee suuqyada xamuulka hawada adduunka oo muujineysa in dalabku uu sii socdo isbeddelkiisa kobaca xooggan laakiin cadaadiska awoodda ayaa kor u kacaya.
Willie Walsh, IATAAgaasimaha Guud
Maaddaama isbarbardhigyada u dhexeeya 2021 iyo 2020 natiijooyinka billaha ah ay ku qalloocan yihiin saamaynta aan caadiga ahayn ee COVID-19, haddii aan si kale loo xusin, dhammaan isbarbardhigga hoose waa Ogosto 2019 kaasoo raacay qaab dalab caadi ah.
Baahida caalamiga ah, oo lagu cabiray xamuulka tan-kiiloomitir (CTKs), waxay kor u kacday 7.7% marka la barbar dhigo Ogosto 2019 (8.6% hawlgallada caalamiga ah). Kobaca guud ayaa weli ah mid xooggan marka la barbardhigo isbeddelka kobaca celceliska muddada fog ee qiyaastii 4.7%.
Xaaladaha dhaqaaluhu waxay sii wadaan inay taageeraan kororka xamuulka hawada laakiin xoogaa way ka daciifsan yihiin bilihii hore taasoo muujineysa in kororka wax -soo -saarka adduunka uu gaaray meeshii ugu sarreysay:
Qaybta wax-soo-saarka ee Ogosto ee Indices of Maareeyayaasha Iibsashada (PMIs) waxay ahayd 51.9, taasoo muujineysa kor-u-qaadis waqti-gaaban ah si loo dalbado haddii amarradaas lagu raro hawada. Tani waxay hoos uga dhacday 54.4 bishii Luulyo.
Qaybta amarrada dhoofinta cusub ee bisha Ogosto ee PMI -yada waxay ku habboonayd xamuulka hawada, in kasta oo ay ka yaraa taageeradii bilihii hore. Ballaarinta ayaa ku sii socotay heer caalami, hase yeeshee, waxaa jiray koror xagga dhaqaalaha soo koraya.
Saamiga alaabada-iibinta ayaa weli hooseysa ka hor xilliga ugu sarreeya ee tafaariiqda dhammaadka sannadka. Tani waxay u fiican tahay xamuulka hawada, hase yeeshee caqabadaha awoodda oo dheeraad ah ayaa taas halis gelinaya.
“Baahida xamuulka hawada ayaa lahayd bil kale oo xoog badan bishii Ogosto, ilaa 7.7% marka la barbar dhigo heerarkii ka horeeyey COVID. Qaar badan oo ka mid ah tilmaamayaasha dhaqaalaha waxay tilmaamayaan xilli xooggan oo dhammaadka sannadka. Iyada oo socdaalkii caalamiga ahaa uu weli aad u niyad -jabsan yahay, waxaa jira diyaarado rakaab oo yar oo bixiya awoodda caloosha ee xamuulka. Caqabadaha silsiladda sahaydu way sii xoogaysan karaan iyadoo ganacsiyadu ay sii xoojinayaan wax soo saarka, ”ayuu yidhi Willie Walsh, IATAAgaasimaha Guud.
IATA: Baahida xamuulka hawada caalamiga ahi waxay ka sarreysaa awoodda | Blog -ga Warbaahineed wuxuu leeyahay,
September 29, 2021 at 20: 20